Safarka ma Yahay Mid Wakhtigan Munaasab ah? | allsanaag
Safarka ma Yahay Mid Wakhtigan Munaasab ah?
Madaxweeyne Xasan Shiikh Maxamuud iyo Guddoomiyha Baarlamaanka waxa ay dalka ka tageen iyadoo ay u taal hawlo aad u badan oo ay ugu weeyn tahay sidii baarlamaanka loo horgeeyn lahaa ra’iisal wasaaraha cusub iyo wax ka qabashada abaarta baahsan ee ka jirta dalka.
Ma dhacdo inta badan madaxda caalamka ee la soo doortay ineey safar aan macno badan ku fadhiyin ay iska aadaan, iyagoo aan dawladdoo idil aan u sal dhigin. Tusaale, madaxweeynaha Mareeykanka Joe Bide, waxaa la calleemo saaray bishii Janaayo (January) 20keedii, 2021. Markii uu dawladdii iyo hawlihii dhammaa uu isku dubbariday ayuu safarkiisii ugu horeeyey waxa uu ugu baxay wadamo kamid ah qaarada Yurub bishii June 9keedii, 2021, waa afar bil iyo bar kadib.
Hase ahaatee, Xasan Shiikh oo dadkiisa ay abaar, amni xummo, dhaqaalo xummo iyo sicir barar ay heeysato ayaa waxa uu doorbiday inuu iska safro, iyadoo qiil laga dhiganayo Imaaraadka ayuu casuumad ka helay. Ma xumma in lagu casuumo, balse waa in aad safartaa marka aad dawladda oo dhan isku dubba riddato oo cid kasta ay shaqadeeda guddaneeyso.
Dad badan ayaa aaminsan in Xasan Shiikh loo soo dhiibayo sidii uu u maamuli lahaa dalka Soomaaliya afarta sanno ee soo socota, golaha wasiiradda ee la soo magacaabi doono cidda lagu soo darayo iyo cidda laga reebayo, sidii loo ugaarsan lahaa kuwa ka soo horjeeda siyaasadda Imaaraadka, in la fulliyo danaha Imaaraadka ee Soomaaliya, iyo sidii loo yareeyn lahaa gallaangalka dawladaha Qatar iyo Turkiga.
Xasan Shiikh ayaa la aaminsanyahay inuu ku caan baxay musuqmaasuq, in uusan laheeyn qab Soomaalinimo, inuu yahay shakhsi dawlad kasta Haa uun yiraahda oo aan aqoon Maya, inuu yahay shakhsi iska safra, iyo in uu yahay shakhsi aan garaneeyn sida hawlaha ay u kalla muhiimsan yihiin, waana midda maanta sababtay in uu iska safro, iyadoo aysan jirin wax degdeg ah.
Hadaba, waxaa muuqata safarka madaxeeynaha ee waqtigan inuusan aheeyn mid munaasab ah waayoo ma jirto wax degdeg ah oo Imaaraadka loogu cararo, waxaase ka weeyn in hawsho la isugu geeyo sidii wax looga qaban lahaa abaarta baahsan ee ka jirta dalka, soo dhammeeystirka iyo hawlgellinta golaha wasiiradda ee la sugayo.
← Madaxweyne Xasan Culusoow iyo Mahad Salaad oo la kulmay Imaaraadka R’aisal wasaaraha magcaaban oo la kulmay madax hore →